मेलम्चीपछि याङ्ग्री र लार्केको पानी काठमाडौंमा
सोमबार, ९ बैशाख , २०७६
श्रीलंका विस्फोटप्रति प्रम ओलीद्वारा दुःख व्यक्त, मृतकको संख्या २१५ पुग्यो (अपडेट)
३१ परियोजनामा रु. २५ खर्ब लगानीको प्रस्ताव
आर्थिक वृद्धिमा एक फड्को
अब निगमले दिल्लीका लागि सातामा १४ उडान गर्ने
खै पर्यटन मन्त्री ?
टुंगाेमा पुग्यो पार्टी एकता, घोषणा भोलि : प्रचण्ड
श्रीलंका विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या १८७ पुग्यो (अपडेट)
न्यायाधीशहरू र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले लिए शपथ
श्रीलङ्कामा विस्फोटमा २५ जनाको मृत्यु, सयौं घाइते
दाेश्राे किस्ता नपाउँदा एघार सय घर भत्किन थाले
सन्दीपको तीन विकेटको प्रेरणाले दिल्ली विजयी
क्रिस गेलको विकेटसँगै आइपीएलमा सन्दीपको शानदार पुनरागमन
मानसिक रोगः सरकारले समेत हेप्यो
किंग्स इलेभेन पञ्जाबविरुद्ध सन्दीपको पुनरागमन
चाहिंदैन पोषणका पुरिया
भारतका मुख्य न्यायाधीश गोगोईमाथि यौन उत्पीडनको आरोप
बुढीगण्डकी परियोजनाः अर्थ मन्त्रालय नै असहमत
जेट एयर प्रकरण : नेपाललाई फाइदा हुनसक्छ !
अस्ताए वरिष्ठ भाषाविद् शर्म्मा
रिपोर्टमंगलबार, ४ बैशाख , २०७५
राजधानीवासीको तिर्खा मेट्न मेलम्ची नदीपछि अब याङ्ग्री र लार्के खोलामा यस्तै सुरुङमार्ग बनाउने तयारी हुँदैछ, जसले इन्द्रावती सुकाउने मात्र होइन, काठमाडौंकै जनघनत्व बढाउने जोखिम पनि छ ।
२७ चैतमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि निर्मित २६.५ किलोमीटर सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’ सँगै मेलम्चीको पानी पिउने राजधानीवासीको दुई दशकको सपना पूरा हुने भएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकास्थित सुरुङको सिन्धु–ग्याल्थुम खण्डको ७.५ किमी सुरुङ निर्माण सकिएसँगै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ‘ब्रेक थ्रू’ को घोषणा गरेको हो ।
सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’ सँगै मेलम्चीबाट दशैंअघि नै दैनिक १७ करोड लीटर पानी भित्रिने सरकारी घोषणा छ । तर, १९ वर्षअघिको यो सपना पूरा हुँदैमा उपत्यकाको खानेपानी अभाव भने हट्दैन ।
कारण, झण्डै ४० लाख जनसङ्ख्या रहेको अनुमान गरिएको काठमाडौं उपत्यकाको शहरी क्षेत्रमा दैनिक ३७ करोड लीटर खानेपानीको माग छ । जसमध्ये काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले हाल हिउँदमा ९ र वर्षामा १३ करोड लीटर पानी मात्र आपूर्ति गर्दै आएको छ ।
त्यसो भए उपत्यकामा खानेपानी संकटको समाधान के त ? “याङ्ग्री र लार्के”, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा भन्छन् । मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के तीनै खोला इन्द्रावती नदीका सहायक खोला हुन् ।
देवकोटाका अनुसार, पहिलो चरणअन्तर्गत मेलम्चीदेखि सुन्दरीजलसम्म २६.५ किलोमीटर सुरुङमार्फत १७ करोड लीटर पानी उपत्यका भित्र्याउने र दोस्रो चरणमा, याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट क्रमशः ९ र २ किलोमीटर गरी ११ किमी सुरुङबाट दैनिक १७–१७ करोड लीटर पानी ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
“हाल केयूकेएलले उपलब्ध गराइरहेको पानी र मेलम्चीबाट आउने पानीमा याङ्ग्री र लार्केसमेत जोड्दा प्रतिदिन ६० करोड लीटर पानी काठमाडौं भित्रिन्छ अर्थात् एक व्यक्तिको भागमा दैनिक १२० लीटर पानी पुग्छ”, उनी भन्छन् ।
तर, विज्ञहरू एकै नदीका खोलाहरूको दोहनबाट उपत्यकावासीको तिर्खा मेट्ने सरकारी योजना गलत भएको विज्ञहरू बताउँछन् । “यो पानी व्यवस्थापनको परम्परागत ढर्रा मात्रै हो । यसले समाधान होइन, समस्या थप्छ”, जलस्रोतविद् अजय दीक्षित भन्छन् ।
याङ्ग्री र लार्केको पानी समेत उपत्यका ल्याइने योजनाले इन्द्रावती नदी सुक्ने जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, यसले इन्द्रावती सुनकोशी नदीमा मिसिनु अघिसम्मको काभ्रे, दोलालघाटसम्मका बस्तीमा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
“इन्द्रावती खुम्चने मात्रै होइन दोलालघाटसम्मका मेलम्ची, बाँसबारीलगायत इन्द्रावती उपत्यकाअन्तर्गतका जति पनि बस्ती छन्, सबै प्रभावित हुनेछन्”, जलस्रोतबारे जानकार पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन् ।
उनी नदी जता दौडियो त्यतै मान्छे पनि दौडने हुनाले इन्द्रावती सुक्ने क्रममा त्यहाँका बासिन्दा सिंचाइ र खानेपानी खोज्दै काठमाडौं नै ओइरिने जोखिमप्रति अहिल्यै नै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
जलस्रोतविद् दीक्षित एउटै नदीको स्रोत निचोर्नेभन्दा अन्य विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन् । “फेरि, दुई खोलाबाट पानी ल्याउँदैमा सधैंका लागि खानेपानी व्यवस्थापन पनि हुँदैन, त्यसैले पनि नदी मास्न हुँदै हुँदैन”, दीक्षितको भनाइ छ ।
त्यसो त मेलम्ची सुरुङले मूर्तरूप लिंदै गर्दा याङ्ग्री र लार्केबाट पानी ल्याउँदा त्यहाँको पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल र स्थानीयमा पर्न सक्ने असरबारे अध्ययन पनि भइरहेको छ । स्थानीयस्तरमा गठित सरोकार समितिहरूसँग अन्तरक्रिया पनि भइरहेको छ ।
आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक देवकोटा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तीन महीनाभित्र तयार हुने र यसबाट धेरै कुरा प्रष्टिने बताउँछन् । तर, आयोजनाका कारण स्थानीयवासी र पर्यावरणमा असर पार्छ भन्ने तर्कमा उनी असहमत छन् । “वातावरण संरक्षण ऐनअन्तर्गत १०–१० प्रतिशत पानी छाडिने हुँदा बस्तीको दैनिकीमा असर पार्दैन”, उनी भन्छन् ।
याङ्ग्रीस्थित सरोकार समितिका सदस्य गोपाल स्याङ्बो भने याङ्ग्री र लार्केका अधिकांश बासिन्दा कृषिमै निर्भर रहेकाले ५० प्रतिशत पानी खोलामै छाड्नुपर्ने माग राखेको बताउँछन् । “आयोजनाबाट प्रभावित हुने गाउँपालिकाहरूलाई प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा पनि उठेको छ”, उनी भन्छन् ।
जलाधारविद् मधुकर उपाध्या पानीको आवश्यकता पूरा गर्न सुरुङ मार्गलाई मात्र विकल्प देख्नु गलत भएको बताउँछन् । “भोलि अन्य शहरहरूमा पनि खानेपानी अभाव हुन्छ नै, कतिवटा सुरुङ बनाउने ?” उनको प्रश्न छ ।
पानीमा स्थानीयकै स्वामित्व हुने स्थानीयले नै व्यवस्थापन गरे मात्र दिगो विकास सम्भव हुने बताउँदै उपाध्या काठमाडौंमा भएकै स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको तर्क गर्छन् ।
हुन पनि चुहावट उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनको मुख्य समस्या बनिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले हाल वितरण गरिरहेको दैनिक ९ करोड लीटर पानीमा करीब ४० प्रतिशत पानी चुहिएर खेर गइरहेको छ ।
मेलम्ची आएपछि हिउँदमा २६ र वर्षामा ३० करोड लीटर पानी उपलब्ध हुने भनिए पनि वितरण प्रणालीमा सुधार नगर्ने हो भने समस्या ज्यूँकात्यूँ हुने निश्चित छ । केयूकेएलका उप कार्यकारी अधिकृत विजयमान श्रेष्ठ मेलम्ची आएपछि चुहावटलाई २० प्रतिशतमा झर्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको बताउँछन् ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार, याङ्ग्रीमा पानीको वहाव दैनिक २.१२–३.२२ र लार्केमा २.७२–४.०४ घनमीटर प्रतिसेकेण्ड छ । मेलम्चीको दैनिक औसत वहाव भने १२.६ घनमीटर प्रतिसेकेण्ड छ ।
दोलालघाटमा आइपुग्दा, इन्द्रावती नदीको वहाव भने ७१.६ घनमीटर प्रतिसेकेण्ड हुनआउँछ । तर, रसुवाकै लाङटाङ खोलाको औसत वहाव भने ७.५८ घनमीटर प्रतिसेकेण्ड छ ।
केही जानकारको भनाइमा, वहाव अनुपातका आधारमा याङ्ग्री र लार्केको तुलनामा लाङटाङबाटै पानी ल्याइनु उपयुक्त हुनसक्ने बताउँछन् । लाङटाङ खोलाको पानी सोझै त्रिशूलीमा जाने हुँदा त्यस खोलाबाट पानी ल्याउँदा बस्ती प्रभावित नहुने जानकारहरूको तर्क छ ।
जलाधारविद् उपाध्या एउटा विकल्प लाङटाङ हुनसक्ने देखिए पनि मेलम्चीको अम्बाथानदेखि लाङटाङसम्मको दूरी, भूबनोटलगायत थुप्रै कुरा अध्ययन गरिनुपर्ने बताउँछन् । विकल्प नै नभए मात्र दोस्रो सुरुङ खन्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
केयूकेएलका अनुसार, मेलम्ची सुरुङमार्गबाट पानी काठमाडौं आएपछि पहिलो चरणमा चक्रपथभित्र मात्रै वितरण गरिनेछ । खुमलटार, बालाजु, बाँसबारी, महाँकाल, चोभार, कीर्तिपुर, कटुञ्जे, आरूबारी, पाँचपोखरी, सुन्दरीजल, बोडेमा स्थापित ११ वटा रिजर्भभ्वायरबाट पानी घरघरमा पुर्‌याइनेछ ।
आइतबार, ८ बैशाख , २०७६ श्रीलंका विस्फोटप्रति प्रम ओलीद्वारा दुःख व्यक्त, मृतकको संख्या २१५ पुग्यो (अपडेट)
आइतबार, ८ बैशाख , २०७६ ३१ परियोजनामा रु. २५ खर्ब लगानीको प्रस्ताव
आइतबार, ८ बैशाख , २०७६ आर्थिक वृद्धिमा एक फड्को
आइतबार, ८ बैशाख , २०७६ अब निगमले दिल्लीका लागि सातामा १४ उडान गर्ने
रिपोर्ट मानसिक रोगः सरकारले समेत हेप्यो
टिप्पणी चाहिंदैन पोषणका पुरिया
रिपोर्ट बुढीगण्डकी परियोजनाः अर्थ मन्त्रालय नै असहमत